Zuva reZuva: 5 Yakanaka Space Board Mitambo - Game Point - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo
Zuva reZuva: 5 Yakanaka Space Board Mitambo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | May 3, 2022 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, nhau, top list
Zuva reZuva rinopembererwa gore negore musi waChivabvu 3 - uye rave kubva muna 2007. Asi chenjerera: Zuva reUnited Nations Zuva harifaniri kuvhiringidzwa nezororo renyika reNorth Korea rezita rimwe chete. Zvisinei, zuva - kana zuva - rinorembera mudenga, kure kure. Vanounza hupenyu kune vanhu uye panguva imwechete ivo mukana wekuderera-emission simba rekupa. Vatambi vebhodhi zvakare vaenda kunzvimbo: Isu tinopa mitambo mishanu yakanaka yebhodhi muchadenga.
Zuva rine mabhiriyoni akawanda emakore pasi pebhandi raro uye hariratidziki kunge rakaneta. Nyeredzi inopa chiedza nesimba kuNyika, uye inomira apo pasi redu rebhuruu richiritenderera kamwe chete mazuva 365 oga oga. Pakati pesolar system yedu isayenzi nengano panguva imwe chete - nyeredzi iri padyo nenyika inoyangarara zvakadzika muchadenga. Yave nguva yekuti vatambi vebhodhi vapinde mune huru kunze. Muchinotevera tinopa mitambo mishanu yakakurudzirwa yezvido zvakakwirira, umo zvinhu zvose zvinotenderera kune dzimwe nyika.
Twilight Imperium inowanikwa muchiGerman kuburikidza neAsmodee. Mufananidzo: Muparidzi
Twilight Imperium ndiyo prototype yeinonzi "gobvu bhodhi" mubhodhi mutambo chiitiko. Zvakanyanya kuomarara, zvakati wandei, kazhinji kureba zvakanyanya, asi zvinonakidza kusvika kumagumo. Twilight Imperium chiitiko mubhodhi mutambo chikamu uye zita rinogona kuparadza ushamwari. Pfungwa yevanyori Dane Beltrami, Corey Konieczka naChristian T. Petersen inovaka pane inozivikanwa uye yakakurumbira 4X pfungwa: Zviri pamusoro pekuongorora, kuongorora, kusimudzira uye kukunda - uye inokwikwidza, asi panguva imwechete kwete pasina mibatanidzwa. .
Twilight Imperium inoonekwa seyemhando yepamusoro yemutambo webhodhi wakasarudzika. Hazvina pasina chikonzero kuti zita racho parizvino rasvika kuchina edition, iyo inogoverwa muchiGerman kuburikidza neAsmodee. Vatambi vatatu kusvika vatanhatu vanotungamira magumo eboka rakasarudzwa pakutanga uye rakasiyana maererano nekugona kwavo. Kubva ipapo zvichienda mberi, zviri kune vatambi kuti vauye nehunyanzvi hwekuita kuti vagobuda mumutambo. Chinangwa chiri nyore: iwe unofanirwa kuunganidza gumi mapoinzi. NeTwilight Imperium, hapana mubvunzo kuti rwendo ndiyo mubairo. Iyo yehunyanzvi 4X bhodhi mutambo izere nesarudzo kusvika kumagumo. Izvi zvinotevera zvakananga kubva pane izvi: Hapana mitambo miviri yakafanana - maitiro acho anosiyana mune zvakadzama, kunyangwe iwe ukaedza kutamba neakafanana uye anogara ari mapoka akafanana.
Nyaya yacho yakawanda, sezvakaita tactical mikana. Nyanzvi shoma dzinofunga Twilight Imperium, iyo yakatanga kudhindwa kuburikidza neFantasy Flight Games, kuve mutambo webhodhi wakakwana. Vamwe vatambi vanowana kuperevedza ndiyo dzimwe nguva yakanyanyisa kureba nguva yekutamba, iyo dzimwe nguva inogona kudarika zvakanyanya kureba yakatarwa ye480 maminetsi. Nekudaro, kana iwe wakaita benzi reTwilight Imperium, zita iri nderimwe reakanakisa, kana asiri iwo akanakisa, space-themed board mitambo.
Kana iyo yekutanga midziyo isingakukwanire: Zvichakadaro, kune kuwedzera kunosvika makumi mapfumbamwe emaeuro neChiporofita cheMadzimambo, izvo zvinoita kuti mutambo webhodhi utambe nevatambi vanosvika vasere. Kana iwe usingade Twilight Imperium uye uchida kuenzanisa: Imhando ye "Master of Orion" yebhodhi remutambo tafura - yechisimba, yakakura, yakaoma, isingaregi, inogumbura, uye ichiri yakakurumbira.
Twilight Imperium inokurudzirwa kune 3 kusvika 6 (8) vanhu vane makore gumi nemana zvichikwira uye ine nguva yekutamba kubva 14 kusvika 240 maminetsi.
Asmodee | Fantasy Flight Games | Twilight Empire 4th Edition |... * 102,39 EUR tenga
Asmodee | Fantasy Flight Games | Twilight Empire 4th Edition -... * 89,00 EUR tenga
Eclipse - Yechipiri Galactic Age
Eclipse - Yechipiri Galactic Zera mutambo webhodhi we4X wakagoverwa muGermany nePegasus Mitambo. Mufananidzo: Muparidzi
Mune iyi 4-paundi, 8X nyanzvi mutambo, vatambi vanotora zvinzvimbo zvevatungamiriri veyakakura interstellar budiriro uye vanoedza kuwana hutongi muboka renyeredzi pamusoro pematenderedzwa masere. Muchikamu chega chega, budiriro yako pachayo inogona kukwidziridzwa nekuongorora uye kurodha zvikamu zvitsva zvemuchadenga, kutsvaga matekinoroji matsva nekuwedzera zvikepe zvemuchadenga. Kukunda kunoenda kumunhu akaunganidza mapoinzi akawanda mushure mekutendeuka kwe8 kuburikidza nehondo dzakakunda, mibatanidzwa yezvematongerwo enyika, kutonga kwezvikamu uye monoliths, zvakawanikwa uye kubudirira kwehunyanzvi.
Zviri mukati mebhokisi chete zvinoratidza kuti mutambo hauna kukodzera kupfupi mutambo wemhuri husiku. Pakati pezvimwe zvinhu, 149 miniature, mazana maviri negumi emitambo zvidimbu uye anopfuura mazana mashanu nemakumi manomwe matiles anozadza bhokisi. Kuenzaniswa nenhamba huru idzi, denderedzwa "chete" rakakamurwa kuita zvikamu zvina. Pakutanga kwedenderedzwa rega rega pane chikamu chekuita. Pano chimwe chezvitanhatu zvinogoneka zviito zvinosarudzwa mukutenderera kusvikira munhu wese apfuura. Zviito izvi Ongorora, Vaka, Tsvagiridzo, Fambisa, Simudzira, uye Affect. Kana iwe wapasa, unogona kuita maitiro gare gare muchikamu chekuita. Aya ndiwo akadiridzwa-pasi shanduro dzezvitatu zvezviito zviripo. Muchikamu chehondo, hondo dzinogadziriswa uye zvikamu zvinokundwa.
Hondo dzinoitika kana paine zvikepe zvemunhu mumwe uye mamaki uye / kana ngarava dzemumwe munhu kana ngarava dzisina kwazvakarerekera muchikamu. Mushure mechikamu chekurwa, mari yekuchengetedza inofanira kubhadharwa. Mukuwedzera, zvinhu uye tsvakurudzo zvinogadzirwa. Kana munhu asingakwanise kuvhara kuchengetedza kwavo nekutengesa kana kusiya zvikamu, ivo vanobviswa mumutambo. Muchikamu chekupedzisira chekutenderera, kuchenesa uye kugadzirira zviito zvinoitwa.
Eclipse inokurudzirwa kuvanhu vaviri kusvika ku2 vane makore gumi nemaviri zvichikwira uye ine nguva yekutamba yemaminetsi makumi matanhatu kusvika zana nemakumi maviri.
Pegasus Mitambo 51842G - Eclipse - Yechipiri Galactic... * 139,89 EUR tenga
Pulsar zvinoreva kutamba mugore ra2849. Mufananidzo: muparidzi
Sezvinoratidzwa nezita racho, vatambi vemutambo uyu vari mugore ra2849. Vanhu vakadzidza kushandisa simba remapulsars. Izvozvi zviri kumutambi kushandisa simba iri uye kuongorora nzvimbo, kutora pulsars uye kugadzira matekinoroji anozovabatsira kuvaka simba remagetsi pachiyero che cosmic. Muzvikamu zvisere, umo vatambi vane huwandu hwe3 dice pamativi ose, zvakakosha kutarisana nezviito izvi zvishoma sezvazvinogona.
Imwe neimwe yezvikamu zvisere inotanga nekukandwa kwedayisi. Aya akaunganidzwa nemeso avo uye ipapo chiratidzo chinoiswa papakati. Nhambwe kubva kuMedian inotarisa kuti "mutengo" wedhizi rine imwe nhamba yakakura sei. Neimwe nzira, kunyorwa kwedhanzi kunotanga. Zvichienderana nechinhambwe chemucherechedzo wepakati, mamakisi emunhu anofanirwa kuendeswa mberi kana kumashure pane yekutanga kana tekinoroji track. Munhu anotevera asati asarudza kufa, mucherechedzo wepakati unogadziriswa. Muchikamu chechiitiko chinotevera chikamu chedhayisi, vatambi vanogona ikozvino kushandisa dhayisi ravakasarudzwa kuita zviito zvinoda hunhu hunoenderana.
Semuenzaniso, unogona kubhururuka nechako chemuchadenga. Mitsva yemapuraneti masisitimu anowanikwa anounza mabhonasi, kana pulsars inogona kutorwa. Izvi zvinogona kuwedzerwa mumatanho maviri muhukuru hwakasiyana kuburikidza nechimwe chiito. Zvimwe zviito zvinokutendera iwe kuti uvake transmitter zvimiro, patent tekinoroji kana kushandisa zviito pamuzinda wako wakavanzika. Muchikamu chekugadzira chinopedzisa kutenderera, iyo nyowani yekutendeuka yakatemerwa, pakati pezvimwe zvinhu, uye kune mapoinzi ezvimiro zvakapedzwa.
Mutambo uyu unopera mushure memaround masere. Ani nani ane mapoinzi akawanda anohwina mutambo.
Mutambo wekunyora dhayi / dhizi rekuisa Pulsar 2849 inokurudzirwa kuvatambi vaviri kusvika vana vane makore gumi nemana zvichikwira. Mutambo unotora anenge maminitsi makumi mapfumbamwe.
IELLO Pulsar 2849 * 57,68 EUR tenga
Beyond the Sun inowanikwa munharaunda kubva kuStrohmann Games. Mufananidzo: Muparidzi
Kutsvaga kwekugara kutsva kwevanhu uye kuongorora kwayo uye koloni idingindira rakakurumbira remitambo yebhodhi. Pano inogona kupinda pasi pemvura, paMars, kana kunze kwesolar system senge Beyond the Sun. Pasi rinongova pasi riri kufa muzana remakore rechi23. Mukuedza kwakabatana, vanhu vakakwanisa kugadzira matekinoroji avanogona kufamba nawo kubva musolar system. Mapato ari paNyika akaisa misiyano yavo parutivi kuchengetedza ramangwana revanhu. Sevatungamiriri vemapoka aya, zvave kune vatambi kuti vawane imba nyowani pakati peakawanda emapuraneti system. Vese vari kurwira kuva bato rine simba muzera idzva.
Iko kuomarara kwemutambo weupscale connoisseur hauwedzeri mune yakakura seti yemitemo, asi inoonekwa zvakanyanya mune akasiyana mikana iripo yekuvandudza kwako wega. Munhanho yekutanga yenguva yako, iwe unofambisa chidimbu chekuita pane yepakati tekinoroji bhodhi kuenda kunzvimbo yekuita uye ita chakabatana chiitiko. Zviito izvi zvinofanirwa kuferefetwa zvisati zvaitika. Muchikamu chechipiri chekugadzira, iwe unosarudza pakati pekukura kwevanhu, kugadzira ore uye kutengesa zviwanikwa. Pakupera kwekutendeuka, kubudirira kunogona kutorwa. Zvino chijana chemutambi anotevera. Izvi zvinoenderera mberi kusvika pave nemakadhi mana ekubudirira pamakadhi ekubudirira. Ipapo kupera kwemutambo kunotangwa. Pakupedzisira, boka rine mapoinzi akawanda ekukunda rinokunda. Mikana muchikamu chekuita zvakasiyana uye inogona kugadziridzwa sezvaunoda zvichienderana nekuwedzera kweiyo yako tekinoroji muti.
Beyond the sun inoburitswa neStrohmann Games. Inokurudzirwa kune 2 kune 4 vanhu vane makore gumi nemaviri uye kupfuura uye inotora pakati pe12 ne90 maminetsi.
Strawman Games STR21004 Beyond the Sun (German) * 66,68 EUR tenga
Cryo ndeye drama muchadenga. Mufananidzo: Muparidzi
MuCryo, chikepe chemuchadenga charovera papasi nechando mushure mechiitiko chisingazivikanwe chekuparadza. Mune ino injini yekuvaka uye yevashandi yekuisa mutambo, vatambi vanotora chinzvimbo chemapoka anehasha eiyi spaceship achirwira kupona papasi rine ruvengo uye kutonga kwepasi pebako network. Mapako ndiyo chete nzvimbo inozogoneka kupona zuva ranyura. Drones inotumirwa kunze uye zviwanikwa zvinounganidzwa, yako papuratifomu inokwidziridzwa uye vateveri vazhinji vevashandi vako vanounzwa kwakachengeteka mumapako.
Muchikamu chako iwe unogona kusarudza kubva pazviito zviviri zvinogoneka. Pamwe iwe unotumira drone kana ako ese ma drones anoyeukwa. Madhodhi akasiyana-siyana pazvikamu zvengarava zvechitundumuseremusere chakapwanyika aripo kuti atumire ma drones. Pamusoro pematairi ezvishandiso, ayo anogona zvakare kushandiswa kuvandudza yako chiteshi, pane sarudzo yekununura yako wega makapulisi evashandi kana kuchinjana zviwanikwa zvezviito kana zvimwe zviwanikwa mumasanganiswa akasiyana. Pamusoro pezvo, ma drones anogona zvakare kutumirwa kutakura vashandi pods akamboiswa pamotokari mumapako.
Kana iwe ukadzosa ese ma drones pachinzvimbo, iwe unogamuchira zviwanikwa zvechero crew capsules angave akatumirwa, gadzirisa chiitiko uye woisa drones kumashure papuratifomu yako. Zvichienderana nechiteshi panomhara drones, kune mabhonasi akaiswa ipapo zvisati zvaitika. Mutambo unopera kana iyo Sunset Incident tile yagadziriswa. Ipapo vatambi vanowana mapoinzi eakanunurwa macapsules mumapako, hukuru hwemapako, kukwidziridzwa uye mota dzepuratifomu yavo uye yemakadhi emishini. Munhu ane zvibodzwa zvakawanda ndiye anokunda.
Cryo mutambo unowanikwa wevatambi 1 kusvika 4 uye unokurudzirwa kune makore gumi nematatu+. Mutambo unotora anenge maminitsi makumi matanhatu
Asmodee | ZMan | Cryo | Nyanzvi Game | strategy game | 2-4... * 38,37 EUR tenga
Kare Kasino mini-mitambo inowanikwa mumitambo iyi yemavhidhiyo
Inotevera Stellaris: Nemesis Kuwedzera kweConsole iri pano
Chikafu chekufunga kuburikidza nebhodhi mutambo: Mutengo
Russian Railroads - Iyo Hypetrain iri kufamba ...
Microsoft flight simulator ine matambudziko: mafani anowanzo kudana mutambo "Instalation Simulator"